Apple kubhadhara yave padyo nekutanga kuGerman | Ndinobva mac
Tiri kutarisa uye tichiona kuwedzera kweApple Pay munyika dzakasiyana dzeEuropean Union kubva parutivi uye hatina nhau nezvekuuya kweshumiro iyi kuSpain. Zvino ungaverenga sei mumusoro wenyaya ino, nyika inotevera kugamuchira Apple Pay ichave Germany. Saka zvirinani kuti vamwe vezvenhau munyika yeGerman vanozvizivisa uye zvinoita sekunge vanogona kuzvizivisa zviri pamutemo pachiitiko chinotevera chekambani icho sekuziva kwedu tese kuti chichava China chinotevera, Gumiguru 27.
Parizvino wekutanga kushandisa Apple Pay mukondinendi yekare yaive United Kingdom uye ikozvino France, Russia neSwitzerland zvinotevera nekuwanika kwekubhadhara kuburikidza neApple Pay. Parizvino zvese zvinoita kunge zvinoratidza kuti sevhisi ichavhurwa kuGerman nekukurumidza uye izvi zvinoreva izvo Kuwedzera muAsia neEurope kunoenderera mberi nekuita kwayo.
Imwe nguva yapfuura, CEO weApple pachake akaudza vezvenhau kuti nzira yekubhadhara iyi ichavhurwa zviri pamutemo munyika medu gore ra2016 risati rapera, asi tiri kuona kusvika uku kubva kure kunyangwe tichine gore riri pamberi. Zvinotaridza kuti masangano emabhengi nekambani yeCupertino havabvumirane pane zvidimbu zvinodiwa kuti vatange sevhisi iyi, iyo yechinguvana inodzivirira kusvika kwepamutemo uye inotonga chero zuva rekufungidzira. Ichave nguva yekuenderera mberi nekumirira kuti uone panofambira mberi nyaya asi zvinoita sezviri pachena ndizvozvo Germany iri padyo nekuve neApple Pay zviri pamutemo inoshanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple kubhadhara yave pedyo kuvhura kuGerman
Maitiro ekubvisa maapplication kubva kuDock mu macOS Sierra